रानीपोखरीमा सके प्राकृतिक स्रोतकै पानी भर्ने तयारी थियो । प्रयास पनि भयो । बर्खा लाग्नु अघिदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको प्रयास विफल भएको छ । अब अन्य विकल्पबाट पानी भर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
पशुपतिमा धमाधम कंक्रिट
पशुपति क्षेत्रमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि निर्माण नगर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश छ  । यो आदेशविपरीत हुने गरी निर्माणचाहिँ रोकेको छैन  ।
परम्परादेखि प्रयोगमा आइरहेको जमिन चिहानका रुपमा प्रयोग गर्न नपाएपछि दर्शनधारीहरू आन्दोलित छन् । उनीहरूले समस्या सुल्झाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग पटकौं आग्रह गरे । कोषका पदाधिकारीहरू भने यो समुदायका अगुवालाई भेट्न समेत आलटाल गरेको छ ।
सरकारले गुठी संस्थानलाई बुझाएन १४ अर्ब
नक्सालको नन्दी केसर गुठीको जग्गा दिएबापत् सरकारले १ अरब ५३ करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ गुठी संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने छ । २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर यो जग्गा लिएको थियो । नन्दीकेशर महादेव गुठीको १९ रोपनी ३ आना ३ दाम जग्गा जनआन्दोलन स्मृति पार्क बनाउन सरकारले लिएको थियो । त्यो ठाउँमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पार्क निर्माण गरेको छ । पार्क निर्माण गर्न पनि संस्थानको सहमति नलिएको संस्थानले जनाएको छ ।
गुठियारको हक समाप्त भयो भने के हुन्छ ? निजी गुठी राज्यले लियो भने त्यसको असर संस्कृतिमा कस्तो पर्छ ? यो विषयमा अहिले चर्चा भइरहेको छ  । सरकारले ल्याउन लागेको गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन विधेयकमा भएको यही व्यवस्थाको विरोध भइरहेको छ  ।
सरकारले डेढ महिनाअघि ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गराएसँगै उपत्यका र मुलुकभरका गुठियार, संस्कृतिकर्मी र सम्पदा संरक्षण अभियन्ता आन्दोलित छन् । उनीहरुले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए गुठीका जग्गा सखाप हुने भन्दै चिन्ता जनाइरहेका छन् भने सरकारी पक्षले किसानका समस्या सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ । खासमा के हुन् गुठीका गुत्थी ?
निसानामा निजी गुठी
सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको एउटा प्रमुख निसाना निजी गुठी भएकाले यसका अनेकौँ जटिलता फेरि सतहमा आएका छन् । निजी गुठीलाई समेट्न सार्वजनिक गुठीको परिकल्पना गरिएको भूमिसुधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई खेलकुद अनिवार्य गरेको छ । वेद विद्याश्रमका विद्यार्थीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू भएको छैन । केही खुला ठाउँमा बगैंचा छ । अरु ठाउँ मासिँदै आएका छन् । ‘विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँ नै छैन,’ विद्याश्रमका प्रधानाध्यापक केशव अधिकारी भन्छन्, ‘भएका जग्गा धमाधम मिचिँदै र मासिँदै आएका छन् ।’